နေ၀န်းနီ ဓာတ်​​သေ ဆြာဖြစ်​သွားခြင်း -၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ​နေ၀န်းနီ ဓာတ်​​သေ ဆြာဖြစ်​သွားခြင်း -၄	7
​နေ၀န်းနီ ဓာတ်​​သေ ဆြာဖြစ်​သွားခြင်း -၄
Posted by naywoon ni on Mar 18, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary |7comments
ဓာတ်​​သေတစ်​ကယ်​ရိုက်​ပြီ စိတ်​ကူးနဲ့ ရိုက်​လာတဲ့ ဓာ​တ်​သေ တစ်​ကယ်​ရိုက်​ဖြစ်​ပါပြီ။ ဘယ်​သူရိုက်​မလဲ လာ​ဟေ့ “​ဒေါက်​ ဂွပ်​ ” ဆိုပြီး ရိုက်​လို့ ရတာ မဟုတ်​ဘူးဗျ။ မှတ်​ပုံတင်​ လုပ်​ဖို့ ဆို​တော့ ဟုတ်​​သော်​ရှိ မဟုတ်​​သော်​ရှိ ရုံးလုပ်​ထုံးလုပ်​နည်း​လေး​တွေ ဖြည့်​စရာ ရှိတဲ့ပုံစံ​လေး​တွေဖြည့်​ ။ သူတို့လိုချင်​တဲ့ ​ထောက်​ခံစာ​လေး​တွေ ပြည့်​စုံ​အောင်​လုပ်​ရ​သေးတယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီက သူတို့ဆီက ပုံစံ အတွဲကြီးနဲ့ ထွက်​လာမှ လက်​​ဗွေ နှိပ်​ ( လက်​နှစ်​ဘက်​ ဆယ်​​ချောင်းစလုံးနှိပ်​ရတာ ။ ပုံစံက ၂ရွက်​ အခါနှစ်​ဆယ်​ ) ပြီးမှ ဓာတ်​​သေရိုက်​ ။ လူနာမယ်​ ရွာနာမယ်​ ကင်​မလာထဲက SD Card နံပါတ်​​ရေး မှတ်​ ။ အဲ့ဂလို ။ ကင်​မလာထဲက​နေ လူတစ်​​ယောက်​ကို ဒဲ့ ကြည့်​ရတာ ကိုက ခံစားမှု တစ်​မျိုး ။ အရင်​ရိုက်​ဖူးတာက အရိုက်​ခံရမဲ့သူက သူ့ကို ရိုက်​မှန်းသိတာမဟုတ်​ဘူး ။ ဖလက်​ရှ်​ မီးပွင့်​သွားမှ သူ့ကို ဓာ​တ်​​သေ ရိုက်​မှန်းသိကြတာ ဆို​တော့ သိပ်​​ပြောစရာမလိုဘူး ။ ခု​တော့ ကြည့်​ဦး ​ဈေးဦး​ပေါက်​တာက ​ကောင်​မ​လေး တစ်​​ယောက်​ဆို​တော့ ။ ​နောက်​ခံကား​ရှေ့ ထိုင်​ခုံ​လေး​ပေါ်မှာထိုင်​​နေတယ်​ ။ သူ့ကို ဓာတ်​ပုံရိုက်​မယ်​ ဆိုတာသိ​နေတယ်​ ။ ကင်​မလာနဲ့ ချိန်​ကြည့်​တဲ့အခါ ……… သူဘယ်​လိုမှ တည်​မ​နေနိုင်​ဘူး ။ ​ဘေးက စ, ​နေတာလည်းပါတာ​ပေါ့ ။ အဲ့​မေ့လို့ မှတ်​ပုံတင်​ က လိုင်​စင်​ ဓာတ်​​သေ ​တွေမှာက ကန့်​သတ်​ချက်​​တွေ ရှိတယ်​ ။
( မိန်းက​လေးဆိုရင်​ ရှပ်​အင်္ကျီ ​ကော်​လံနဲ့ မရိုက်​ရဘူးတဲ့ဗျ ။ ပြီး​တော့ အနက်​​ပြောင်​ တီရှပ်​ စပို့ရှပ်​ မဖြစ်​ရဘူး ။ ဆံထိုး ဆံညှပ်​ ဘီးဆံပတ်​ တပ်​မထားရဘူး ။ သနပ်​ခါး​ဗေဒါ ကွက်​နဲ့ဆိုရင်​ အဖြူ အမဲ ရိုက်​တာဖြစ်​တဲ့ အတွက်​ ဓာတ်​​သေမှာ အကွက်​ရာကြီးထင်​​နေမှာ​ကြောင့်​ ဖျက်​ခိုင်းရပါတယ်​ ။ ရိုးရိုးမိန်းမ၀တ်​ အင်္ကျီ အ​ပေါ်ဝတ်​ အ​နွေးထည်​ ထပ်​၀တ်​မထားရ တဲ့ဗျာ ။ ဘယ်​နဲ့လဲ ။ မှတ်​ပုံတင်​ အတွက်​လိုင်​စင်​ ဓာတ်​ ​သေ အပြင်​မှာ ရိုက်​သွားရမှာဆိုရင်​ သိသွား​အောင်​လို့ပါ ။ ​ယောက်ျား​လေးများကျ​တော့ ရှပ်​​ကော်​လံ စတပ်​ ဖြစ်​ရပါမယ်​ ။ စပို့ရှပ်​ တီရှပ်​ မရပါဘူး ။ အ​နွေးထည်​ ၀တ်​ရိုက်​လို့မရပါဘူး ။ နားမှာ ကပ်​ထားတဲ့ နကပ်​​တွေဘာ​တွေပါရင်​ ဖြုတ်​ခိုင်းရပါတယ်​ ။ ဒီစည်းကမ်းချက်​​တွေက ဘယ်​သူ ချမှတ်​ခဲ့မှန်းမသိ​ပေမဲ့ အဲ့ ဒိစည်းကမ်းချက်​​တွေ​ဘောင်​၀င်​​အောင်​ ရိုက်​​ပေးရသလို လူနဲ့ ကင်​မလာ နံပါတ်​လည်း မလွဲ​အောင်​မှတ်​ရပါတယ်​ ။ ) အဲ့​စော​စောက ​ကောင်​မ​လေးက ​ဗေဒါကွက်​​လေးပါ​နေတာ မဖျက်​ခိုင်းလိုက်​မိဘူး ။ ပထမဆုံး အကြိမ်​ရိုက်​ရမှာ ဆို​တော့ ​မေ့တာ​ပေါ့ဗျာ ​နော့ ။ သူအာရုံနဲနဲ ​ပြောင်းသွား​အောင်​ သနပ်​ခါး ဖျက်​ခိုင်းလိုက်​ဦးမယ်​​ပေါ့ ။ အ​နွေးထည်​ အင်္ကျီ ​လေးပါ ချွတ်​ခိုင်းလိုက်​တယ်​ ။ ဖုန်းထဲမှာ သူငယ်​ချင်းတစ်​​ယောက်​ထည့်​​ပေးလိုက်​တဲ့ မူဗွီ​လေး တစ်​ခုလို​ပေါ့ ။ ” ဘယ်​ဘက်​နဲနဲ အိုးများသွားပြီ နဲနဲ​လေး အဲ့ ပြုံးပြုံး​လေး​နေ လှသွားဘီ ” ဆိုသလို​ပေါ့ ။ ကင်​မလာနဲ့ အထိ အ​တွေ့ မရှိ​တော့ ကင်​မလာ​ရှေ့မ​နေတတ်​ဘူး ။ ​ခေါင်း​စောင်​​နေတာ ။ မျက်​လုံးက ​အောက်​ကိုကြည့်​​နေတာ ။ ​နောက်​ လက်​ပြင်​ ကုန်း​နေတာ ။ အကုန်​ပါးစပ်​က​ပြော​ပေး​နေရတာ ။ အာ….. လက်​နဲ့ သွားပြင်​မ​ပေးရဲပါဘူး ။ ” ​ရှေ့တည့်​တည့်​ကြည့်​ နှုတ်​ခမ်းနဲနဲ ​စေ့ ။ ရိုက်​ပြီ …..။ သွားပြီ ။ ကင်​မလာ ခလုပ်​ အနှိပ်​ မီးအပွင့်​ မင်းသမီးက မျက်​လုံးအမှိတ်​ ကွက်​တိ ။ တစ်​ကယ့်​ ကွက်​တိပဲ ။ ​နောက်​တစ်​ခါပြန်​ရိုက်​ ။ မီးအပွင့်​ မျက်​လုံး အမှိတ်​ ။ မရ​တော့ဘူး သုံးကြိမ် ​မြောက်​ကျ​တော့ မီးပိတ်​ထားလိုက်​တယ်​ ။ အသံတိုးတိုး​လေးပဲ ထွက်​လာပြီး မီးမပွင့်​လို့ မီးအပွင့်​ မျက်​လုံးမှိတ်​ပြမလို့ ​ချောင်း​နေတဲ့ မင်းသမီး ဘယ်​ရမလဲ ။ ငါလဲ ​နေ၀န်းနီ ကွ ဆိုပြီး ကင်​မလာ ကို ခပ်​တည်​တည်​ ကိုင်​ပြီး စားပွဲမှာထိုင်​ နာမယ်​စာရင်း သွင်း​နေ​တော့ အ​ဖော်​ပါလာတဲ့ အ​မေဖြစ်​သူက
” ဆရာ​လေး ရပြီလား ”
​နေ၀န်းနီ ကလည်း ” ဟုတ်​ …. ရပါပြီ ” ဆိုပြီး ​စော​စောက သူ့သမီး ဓာတ်​​သေ ဖွင့်​ပြ ။ မျက်​လုံးမှိတ်​ရက်​ နှစ်​ပုံ ။ ဖွင့်​ရက်​ တစ်​ပုံ ။ ​ရှေ့က နှစ်​ပုံ ဒလိ လုပ်​ ။ ဓာ​သေ နံပါတ်​ မှတ်​ပြီး ​ခေါင်း ​မော့ အကြည့်​ ​​ရှေ့မှာ ​ရောက်​​နေတာက သုံး​ယောက်​ ။ ​ဆောင်းတွင်း မိုးအုံ့မှိုင်းမှိုင်း မှာ ​နေ၀န်းနီ တို့ ​ချွေး​တွေဘာ​တွေ ပြန်​လို့ …….. ။
​ရှေ့​ရောက်​​နေတဲ့ သုံး​ယောက်​ အလှည့်​ကျ လက်​​ဗွေနှိပ်​​ပေး ဓာတ်​​သေရိုက်​ မီးပိတ်​ပြီးသားဆို​တော့ အို​ကေပဲ ။ သူတ်ို့မျက်​လုံး မှိတ်​မပြကြ​တော့ဘူး ။ တစ်​ခုခက်​တာက လက်​​ဗွေနှိပ်​တဲ့ အချိန်​​ကော ဓာတ်​​သေ ရိုက်​တဲ့ အချိန်​ပါ မတ်​တပ်​။ ဓာ​တ်​သေ ရိုက်​တဲ့ အချိန်​ ခါးက ​ကွေးရ ညွှတ်​ရ​သေး ။ဒီကြားထဲ အဖျက်​က ၀င်​လာပြန်​ ။ တစ်​မနက်​လုံး မမြင်​ရတဲ့ ဘာနုရာဇာက ​နေ၀န်းနီရဲ့ ​နောက်​ခံ ပိတ်​စ ​ပေါ် ဟိုတစ်​ကွက်​ ဒီတစ်​ကွက်​ လာ​နှောက်​ယှက်​ပြီ ။ အဲ့ဒိ​တော့ ဘိုလုပ်​မလဲ ။ အိမ်​နံရံမှာ ချိတ်​ထားတဲ့ ပိတ်​စကိုဖြုတ်​ ။ အနားမှာ​ထောင်​ထားတဲ့ ဝါးကပ်​တစ်​ခုမှာ ညှပ်​ ။ အဲ့ ဝါးကပ်​ကို ၀င်းနံရံ မှာ ကပ်​ပြီး​ထောင်​လိုက်​တာ​ပေါ့ ။ ဝါးကပ်​အကျဲက အလင်း​ပေါက်​​လေး နဲနဲပါးပါး​တော့ရှိတာ​ပေါ့ ။ ဒီတစ်​ခါကျ​တော့ ထိုင်​ခုံမလို​တော့ဘူး ။ ဝါးကပ်​က နဲနဲမြင့်​သွားပီ ။ အဲ့​တော့ အရိုက်​ခံမဲ့သူနဲ့ ရိုက်​မဲ့သူ ​ဖေ့စ်​တူ​ဖေ့စ်​ မတ်​တပ်​က​နေရိုက်​လို့ရသွားပြီ​လေ။ ခါးညွှတ်​စရာ မလို​တော့ဘူး ။ ​နောက်​ကျပြီး ထွက်​လာတဲ့ ​နေကို​တောင်​ ​ကျေးဇူးပဲလို့​ပြောရမလို ။ အဲ့သလို အဲ့သလိုနဲ့ တစ်​​ယောက်​ပြီး တစ်​​ယောက်​ပြီး တစ်​​ယောက်​ ဓာတ်​​သေ ရိုက်​လာလိုက်​တာ လူနဲနဲအဆက်​ပြတ်​သွားလို့ လိုင်းမရှ်ိတဲ့ဖုန်းဖွင့်​ပြီး နာရီ ကြည့်​လိုက်​​တော့ ​နေ့လည်​တစ်​နာရီ​ကျော်​​နေပြီ ။ ဟိုနှစ်​​ယောက်​​ရှေ့မှာ လူမပြတ်​​သေးဘူး ။ သူတို့နား မ​ယောင်​မလည်​သွားကြည့်​ ။ ​ကျောင်းက ​ပေးလိုက်​တဲ့ အသက်​အ​ထောက်​အထား ​ထောက်​ခံစာ​ပေါ် အငြင်းပွား​နေတာ အသာနား​ထောင်​ရင်း ပြုံးမိ ။ အ​တွေးတစ်​ခုဝင်​လာတာနဲ့ ၀င်​​ပြောမိမှာစိုးလို့ ​စူပါ​ကော်​ဖီမစ်​ တစ်​ထုပ်​နဲ့ မတ်​ခွက်​ဆွဲပြီး အသာ​လေးပြန်​လာခဲ့ရတယ်​ ။ ​နောက်​ အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးစာ​ရေးက ​ရေ​နွေးဓာတ်​ဗူး ဆွဲပြီးလိုက်​လာတာနဲ့ ​နောက်​တစ်​​ခေါက်​​တော့ပြန်​သွားစရာ မလို​တော့ဘူး ဟဲ့ဆိုပြီး ကိုယ့်​ဖာသာကို ​ကော်​ဖီမစ်​​ဖျော်​ပြီး ​ဆေးလိပ်​​လေးဖွာ ​ဆေးလိပ်​မီးခိုး​ငွေ့​တွေ​နောက်​လိုက်​ရင်း တစ်​စုံတစ်​ရာကို လိုက်​ရှာ​နေမိ​တော့တယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီ
ခင်ဇော် says: ဟုတ်ကဲ့။
နောက် ဆို အကျဉ်းဦးစီးက ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လို ရင် ခေါ်မယ်တဲ့ ဥနီ။
Kaung Kin Pyar says: လိုင်စင် ဓာတ်သေတွေမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတယ်….။ ဟုတ်ပါ့…။ ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ…လိုင်စင်ဓာတ်ပုံမယ်…ခပ်တည်တည်နေနေတဲ့ပုံတွေထက်စာရင်….မျက်နှာချိုချိုနဲ့..ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ပိုသဘောကျမိ….
လိုင်စင်ပုံတွေချည်းရိုက်ခဲ့တာလား ဆြာနေ….။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ကင်မလာလဲပါတာ…အနီးအပါး မရိုက်ခဲ့ဝူးလား…လို့..
ဥပမာ ထန်းတောနဲ့ နေလုံးကြီးတို့ ရေချိုးဆိပ်တို့ဘာတို့…
naywoon ni says: ကင်​မလာနဲ့ ရိုက်​ပြီး အင်​တာနက်​​ပေါ်တင်​ဖို့ အဆင်​မ​ပြေလို့ပါ ။ အပိုင်း ၅ မှာ​တော့ ဖုန်းနဲ့ ရိုက်​ထားတဲ့ပုံ​လေးထည့်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ ။ ထန်း​တောထက်​ ပိုလှတဲ့ ပုံ​ပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
Alinsett@Maung Thura says: ရှာလိုက်မိတဲ့ တစုံတရာကို
.တွေ့ မတွေ့ သိရဖို့ နောက်အပိုင်းမှာ ဆက်ဖတ်မယ်ဆြာရေ့
တောင်ပေါ်သား says: ကျုပ်မလည်း မှတ်ပုံတင်မရှိပဲ နေလာတာကြာပေါ့
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က မှတ်ပုံတင်ပျောက်လို့ သွားလုပ်တာ ၃ သောင်းတောင်းလို့ ပစ်ထားလိုက်ရော
ခရီးသွားရင် ရုံးကဒ် ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာနဲ့ပဲ ဒိုးနေတာ
အခုတော့ မိုးပွင့် တဲ့
Mr. MarGa says: ဝင်လာတဲ့ အတွေးကို စိတ်ဝင်စားနေသဗျ
naywoon ni says: ကျ​နော်​တို့ ဗမာလူမျိုး​တွေရဲ့ ​မွေးသက္ကရာဇ်​ မှတ်​ပုံ​လေး​တွေ ပတ်​သက်​ပြီး အ​တွေးဝင်​လာတာပါဗျာ ။ ​မွေးသက္ကရာဇ်​ ဆိုလို့ မြန်​မာသက္ကရာဇ်​ပြက္ခဒိန်​နဲ့ ခရစ်​သက္ကရာဇ်​ ပြက္ခဒိန်​အ​ကြောင်း​လေး မှတ်​ထားတဲ့ ​မေးလ်​ Draft ​လေး ပြန်​​တွေ့တယ်​ဗျာ ။ ဒီစီးရီး​လေးပြီးရင်​ ဆက်​ဆွဲရမလားလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.